Rikoooo.com - Enweghị ụda olu, Bombardier CL-415
Nchịkọta ụlọ Mingbọ elu simulators Terminal Prepar3D v4 et v5 (64 ibe n'ibe)
Enweghị mkpuchi ụda, Bombardier CL-415
Jikọtara: 21 Jenụwarị 2016, 21:16
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by donbrindles » Abụọ 04 Feb 2019, 10:23
Ebudatara m ma wụnye Bombardier CL-145 Canadair Super Scooper. Ihe niile dị mma ... ewezuga ụda mkpọchị ọ bụla! Mgbe m buuru ụgbọelu banye p3d4.4 Enwetara m ozi ahụ "E:P3D4GaugesCockpit na-ada efu "Gịnị ka ị ga-eme biko?
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by donbrindles » Abụọ 11 Feb 2019, 09:51
Ọ bụla enyemaka biko? E nyere ụbọchị asaa gara aga,
Laghachi na “Prepar3D v4 et v5 (64 ibe n'ibe) ”